सरकारको तारिफ गर्ने मौका त दिनुस्
सुरेश गिरी | २०७६ असार १६ सोमबार | Monday, July 01, 2019 १६:००:०० मा प्रकाशित
लोकतन्त्रमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा असहमत हुन पाइन्छ। मलाई सरकारका केही काम गराइ र बोलाइमा पटक्कै चित्त बुझ्दैन। त्यसैले म विरोध गर्छु।
के मैले सरकारको विरोध गर्न कसैसँग अनुमति लिनुपर्छ र? पर्छ कहाँबाट लिने, केके फाराम भर्नुपर्छ; म तयार छु। म कुनै विचारधारालाई मान्छु भन्दैमा ती विचारधारा राख्ने पार्टीका नेताले भनेका सबै कुरा सही मानेर हा मा हा मिलाउन सक्दिनँ। म जिम्मेवार नागरिक हुँ र अझै जिम्मेवार हुन चाहन्छु। त्यसैले म गलत कुराको विरोध गर्छु।
तपाईं मलाई सरकार विरोधी भन्नुस् या प्रतिपक्षको समर्थक, त्यो कुराले मलाई खासै फरक पर्दैन। म गलत कुराको विरोध गर्छु, त्यो मैले फलो गरेको पार्टीले गरोस् या सरकारमा बसेका नेताले। तपाईं सही गर्नुहोस्, त्यो बेलामा सपोर्ट पनि गर्छु तर छातीमा हात राखेर सोच्नुस् र भन्नुस् के कति सही गर्नुभएको छ? तपाईंको सरकारले सबै कुरा सही गरेको छ भन्ने लाग्छ भने मलाई बुझाइदिनुहोस्, म भोलिबाट तपाईंहरुकै गुनगान गाएर बस्छु।
सरकारले सबै कुरा सही गरेको छ भन्ने लाग्छ भने मलाई बुझाइदिनुहोस्, म भोलिबाट तपाईंहरुकै गुनगान गाएर बस्छु। तपाईंका राम्राराम्रा कुराको तारिफ गर्ने मौका दिनुस्।
तपाईंलाई लाग्न सक्छ मेरो सोच नै नकारात्मक छ। हो, म नकारात्मक सोच्छु तर मलाई किन र केका लागि नकारात्मक सोच्न बाध्य बनाइयो? त्यो कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु जरुरी छ। यसमा मेरो पनि कमजोरी छ किनकि म तपाईंका 'अरिंगाल' जसरी कानमा तेल हालेर बस्न सकिनँ। आफ्ना आँखैअगाडि भइरहेका गलत कुरालाई सही भन्न सकिनँ।
तपाईंहरुका हावादारी, बकम्फुसे साथै नचाहिने कुराले मलाई तपाईंहरु प्रति नकारात्मक बनायो। हो, मैले पनि बुझेको छु कुनै कुरो रातारात परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तनका लागि निश्चित समय लाग्छ। म त्यति नबुझे जसरी, हिजो भनेको आज किन भएन भनेर प्रश्न पनि सोध्दिन। त्यसरी सोध्नु मेरो मुर्खता हो।
मैले कुनै दिन पानीजहाज, रेल किन आएन भनेर सोधेको पनि छैन। त्यो ६/८ महिनामा आउने कुरा पनि होइन। यसको लागि समय लाग्छ। जुन कुरा समय लाग्छ, त्यो भोलि नै आउने जसरी जब कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो बेला मलाई तपाईंहरूको विरोध गर्न मन लाग्छ। अझ तपाईंका अरिंगालहरुको तपाईंप्रतिको अन्धभक्ति देखेर अझ बढी विरोध गर्न मन लाग्छ।
के यो सबै फरक विचारधारा बोक्ने भएकाले मात्रै आएको हो त? पक्कै होइन। यति विरोध र नकारात्मक सोच तपाईंहरुकै कारण आएको हो।
हुन त तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा जान्नेबुझ्ने मान्छे म मात्रै छु जस्तो लाग्दो हो। त्यो सम्झिँदा अझै बढी वितृष्णा पैदा हुन्छ र विरोध गर्न मन लाग्छ। तपाईंहरूले सानासाना कुरामा बोलेका झुटहरु देखी अझ बढी रिस उठ्छ। आजको हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुराको नजरअन्दाज गरेको देख्दा दुःख लागेर आउँछ। जनतालाई सास्ती दिएर सवारी चलाएको देख्दा मेरो मनले थाम्नै नसकेर तपाईंको विरोध मात्रै होइन चिच्याएर गाली गर्न मन लाग्छ।
सोचेर भन्नुस्, गएको डेढ वर्षमा तपाईंले केही गर्नुभयो? गर्नुभयो त सिर्फ ठूलाठूला गफ र काण्डको फेहरिस्त तयार गर्नुभयो। जहिले अर्कोलाई दोष दिनुभयो। बर्बाद गरेर छोडेको थियो सम्हाल्नै गाह्रो जस्तो देखाउनुभयो। जहिले आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नुभयो। जहिल्यै आफ्ना नजिकका मान्छेलाई च्याप्ने काम गर्नुभयो। ठूलाठूला भ्रष्टचारलाई प्रश्रय दिने काम गर्नुभयो।
देशको बागडोर तपाईंको हातमा छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने लगाम तपाईंसँग छ। मसँग होइन। अलिकति पनि सोचविचार नगरी कहिले यसले झुट बोल्यो, कहिले मलाई थाहै भएन, पत्रिका पढेर थाहा पाएँ भनेर किन गैरजिम्मेवारी जवाफ दिनुहुन्छ?
आसेपासेहरुको मात्रै होइन अरूको कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नुस्। दिनदिनै तपाईं र तपाईंका अरिंगालहरुको झुट प्रचारले म जस्ता हजारौं जनता आजित भइसकेका छन्, बेलैमा सोच्नुस्।
वाइडबडी अनियमितता छानबिन कहाँ पुग्यो? बालुवाटारको जग्गा प्रकरण के भइरहेको छ? मिडिया विधेयकबारे प्रस्ट पार्दिनुस्। हतारोमा ल्याएको गुठी विधेयक त फिर्तै गर्नुपर्‍यो। सुरुमा गल्ती गरेर पछि सच्याउने काम राज्य सञ्चालकले गर्ने होइन। काम गर्नुअघि सल्लाह लिने गर्नुहोस् ताकि पछि पछुताउनु नपरोस्। सबै आसेपासे, अरिंगालहरुको मात्रै होइन अरूको कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नुस्। दिनदिनै तपाईं र तपाईंका अरिंगालहरुको झुट प्रचारले म जस्ता हजारौं जनता आजित भइसकेका छन्, बेलैमा सोच्नुस्।
त्यसैले हामीलाई तपाईंका राम्राराम्रा कुराको तारिफ गर्ने मौका दिनुस्, प्रधानमन्त्रीज्यु। जहिलेसम्म सरकारलाई जनताले आफ्नो महसुस गर्नेछैनन्, म खबरदारी गरिरहनेछु।